Kugxijwe isiphakamiso sikaZuma ngeyomhlaba | isiZulu
Kugxijwe isiphakamiso sikaZuma ngeyomhlaba
Imibiko ehambelanayo Mawusatshalaliswe umnotho - Zuma
Phansi ngomhlambi kazalusile - Zuma I-ANC kumele izihlambulule - Zuma
Johannesburg - Inhlangano i-AfriForum igxeke uMengameli Jacob Zuma ngokuhlaba uhlelo lokuthi abanikazi bomhlaba kumele bawudayise uma kukhona abazimisele ngokuwuthenga.
"I-ANC ilokhu iqhubekile nokuthi lolu hlelo luhambisa kancane izinto, kodwa bayishaya indiva inkohlakalo ebusa eMnyangweni wezokuBuyiselwa koMhlaba," kusho okhulumela i-AfriForum uCornelius Jansen van Rensburg.
Evula ingqungquthela ye-ANC yokudingida imigomo eMidrand ngoLwesibili, uZuma ugcizelele ekutheni kubuyekezwe imigomo, ikakhulukazi eyokubuyiselwa komhlaba kubanikazi.UZuma uthi lolu hlelo ngeke lusebenze ngenxa yokuthi abantu abaningi kuleli bampofu. Uthi uma kuqhutshekwa nalo mgomo kuyochaza ukuthi bayoba baningi abantu angeke babuyelwe umhlaba wabo.
Umvukuzi ongekho emthethweni, ulele emhlabeni obandayo, kulandela ukuminza emfuleni iSand River, eVirginia, ngesikhathi ezama ukubalekela amaphoyisa.
Akube nobumbano kwiNumsa - Vavi
Inyunyana iNational Union of Metalworkers of SA (Numsa), kumele imane ikhohlwe yindaba yokwandisa amalungu uma kungekho ukubumbana nokubambisana ngaphakathi.
Owesilisa osolwa ngokushaya iphoyisa lomgwaqo e-Alberton kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yasePalm Ridge, kusho amaphoyisa kaMasipala waseKurhuleni.